Moby anoratidzira chirevo chake chitsva chemutsipa tattoo - Ona iyo inki - Nhau
Kuru Macelebs Nhau Style Blog
Moby anoratidzira chirevo chake chitsva chemutsipa tattoo - Ona iyo inki
Moby ari kunyatso namatira mutsipa wake kunze uko kana zvasvika kune kwake kudyara-kwakavakirwa kudya.
Pakutanga svondo rino, muimbi akaburitsa tattoo yake nyowani uye inonyanya kuzivikanwa, yaakawana pamutsipa wake.
'VEGAN YEKUPENYU,' iyo tattoo, inoitwa nevamwe vegan uye ane mukurumbira tattoo tattoo Kat Von D, inoverengwa.
ane makore mangani wissam al mana
Ndanga ndiri vegan kweanoda kuita makore makumi matatu nemaviri, saka kutora iyi tattoo kwaiita kunge bheji rakachengeteka. Zvakare, kushandira kodzero dzemhuka uye kusunungurwa kwemhuka ibasa rehupenyu hwangu. Uye kutaura zviri pachena, zvakapetwa kaviri… maita basa @thekatvond
Chinyorwa chakagovaniswa na moby xⓋx (@moby) pana Sep 17, 2019 pa9: 06 am PDT
ndiani ray liotta akaroora futi
'Ndanga ndiri vegan kweanoda kuita makore makumi matatu nemaviri, saka kutora tattoo iyi kwaiita kunge kubheja kwakachengeteka,' akanyora zita rake Instagram foto. 'Zvakare, kushandira kodzero dzemhuka uye kusunungurwa kwemhuka ibasa rehupenyu hwangu. Uye kutaura zviri pachena, zvakapetwa kaviri. '
Mugadziri akaburitsa inki yake nyowani kuti atore spin mushure, achiratidzira pakapeti tsvuku yeMercy For Animals 20th Anniversary Gala muLos Angeles. Pamusoro pechirevo chake che tattoo, Moby akapfekawo T-shati inotsoropodza McDonald's.
Shamwari vegans vakarumbidza Moby nekuda kwetatoo uye kuzvipira kwake kurarama isina nyama.
'Ndinokuda, Moby!,' Kat akanyora.
Punk rock icon Toby Morse akataura, 'Yakaomesesa Neck Tat Yakambove pane Anotapira Munhu !!'
Emma McIntyre / Getty Mifananidzo
Mune 2014 maonero chidimbu muRolling Stone, Moby akavhura nezvesarudzo yake yekuenda vegan muna 1987, iyo yakatanga mushure mekunge atarisa katsi yake akanunurwa Tucker.
'Ndinoda katsi iyi. Ini ndingaite chero chinhu kumudzivirira uye kumuita kuti afare uye kumuchengetedza kubva mukukuvara. Ane makumbo mana uye maziso maviri uye huropi hunoshamisa uye hwakapfuma hupenyu hwepamoyo. Handimbofi ndakafunga mumakore ekukuvadza katsi iyi, 'akadaro. 'Saka sei ndiri kudya dzimwe mhuka dzine makumbo mana (kana maviri), maziso maviri, huropi hunoshamisa, uye hupenyu hwakapfuma hwepamoyo?'
rarama nekelly ratings nhasi
Mwanasikana waPamela Adlon Gidheoni akadhirowa pane chaiwo 'matambudziko ababa' ehunhu 'maBlockers'
Mwanasikana waPaul Walker, iye zvino 20, stun mumifananidzo mitsva: Pics
David Foster, makumi matanhatu nemasere, uye Katharine McPhee, makore makumi matatu nemasere, vari kuroorwa
Scott Disick ASI Kunyora Taurira-Zvese nezveKardashians, Zvisinei Nemushumo
Will Smith anorova 50 Cent yaJada Pinkett Smith jab
Khloe Kardashian anogovera pamberi uye shure kwe 'Revenge Muviri' mifananidzo pa Instagram
Enrique Iglesias naAna Kournikova vakagamuchira muchivande mwana wechitatu?
rafael reyes uye kat von d
irikupi rachel ray yakatorwa
lara spencer yaenda kubva ku gma
ko lara spencer akasiya gma
ndiani akaita miranda lambert kudanana naye